Ixesha lokusebenzisa iifomu eziqhelekileyo ze-'Ye 'ngesiSpanish
Ukwazi Ukwahlukana Kunokukunceda Ufike Kuze Ube Nengqondo Eninzi
IsiSpanish sinamaqoqo amabini esithethi "wena" - oqhelekileyo owaziwayo "wena," okuyi- tú kunye kunye ne- vosotros ngobuninzi, kunye nesimo esisemthethweni "wena," esinobungqina besinye kunye nobugqwetha obuninzi - kwaye ngokuqhelekileyo ngumthombo wokudideka kubafundi baseSpain. Nangona kungekho mithetho ehlala isebenzayo ekunqumeni ukuba ngubani oyisebenzisayo, isikhokelo esingezantsi siya kukunceda ngendlela efanelekileyo xa usenza isigqibo malunga nesigidimi esingahamba nayo.
Nazi ubuncinane izizathu ezi-9 zokusebenzisa izibhengezo eziqhelekileyo nezisesikweni esithi "wena" ngesiSpanish:
Ukusebenzisa ixesha eliqhelekileyo neloLungileyo
Okokuqala, ngelixa kukho ukungafani, umlinganiselo osisiseko phakathi kwesiqhelo kunye nesigama esisemthethweni kukuba i-yangaphambili isetyenziselwa abahlobo namalungu entsapho, ngelixa i-formal isetyenziswa kwezinye iimeko. Usenokucinga ngokuhlukana njengento efana nohlobo, ubuncinci eMelika, phakathi kokuthetha nomntu ngegama lokuqala okanye into engaphezulu. Ingozi yokusebenzisa ifom eyaziwayo xa ungakufanelekanga, kukuba ungangena okanye uhlambele kumntu othetha naye, nangona ungenanga. Ngokubanzi, kufuneka usebenzise iifom ezisemthethweni "kuwe" ngaphandle kokuba kukho isizathu sokusebenzisa ifom eyaziwayo. Ngaloo ndlela, ufike ngokukhuselekileyo njengento ehloniphekileyo kunokuba usengozini.
Imiba yokufaka iifomu zeeFomu ezisemthethweni
Kukho imeko ezimbini apho ifomu elisemthethweni lisetyenziswa rhoqo:
Kwiininzi zaseLatin America, ifomu eliqhelekileyo eliqhelekileyo ( vosotros ) liphantse liphele kwintetho yansuku zonke. Abazali baya kujongana nabantwana babo njengamaphepha, into ezwakalayo ingqongqo kubantu baseSpain.
Kukho imimandla embalwa, ngokukodwa kwiindawo zaseColombia , apho iifom ezingaqhelekanga zisetyenziswa rhoqo.
Ukusebenzisa ifomu eliqhelekileyo ngokukhuselekileyo
Nantsi apho ikhuselekile ngokubanzi ukusebenzisa ifomu eliqhelekileyo:
Xa uthetha kunye namalungu entsapho okanye abahlobo abalungileyo.
Xa uthetha kubantwana.
Xa uthetha nezilwanyana ezifuywayo.
Ngokuqhelekileyo, xa umntu eqala ukuthetha nawe njenge- tú . Ngokuqhelekileyo, kunjalo, akufanele uphendule kwifomu eyaziwayo ukuba umntu othetha nawe njenge- tú ngumntu ogunyazisiweyo phezu kwakho (njengepolisa).
Xa umntu ekwazisa ukuba kulungele ukumlungisa kumagama aqhelekileyo. Isenzi esithi "ukuthetha nomntu oqhelekileyo" ngumtutu .
Xa udibana neontanga, ukuba ngaba isiko kummandla weqela lakho leminyaka kunye nesimo senhlalakahle. Thatha iingcinga zakho kulabo abakujikelezile kunye nomntu othetha naye.
Kwiinkcubeko ezininzi zobuKristu, xa uthandaza kuThixo.
Kweminye imimandla, esinye isivakalisi esaziwayo, vos , sisetyenzisiwe ngee-degrees zokwamukelwa. Kweminye imimandla, inokwenziwa kwesenzo esilandelayo. Ukusebenzisa kwakho i- tú , nangona kunjalo, kuya kuqondwa kule mimandla.
Ukuqulunqwa kwexesha elidlulileyo leSpain lithathe inxaxheba ngokuchanekileyo
Indlela Yokuthetha Unyaka Omnandi NgoJapan
All About Que: Ukusetyenziswa, ukuthetha, kunye nemizekelo ngesiFrentshi
Izithombe zeVintage Mary Mary Retton
Imbali yokuma-Comedy kuma-1970
Xa ukuxhamla umrhumo wezobupolitika kusemthethweni kwaye akukho mthethweni